Ndezvipi Ecommerce Bhizinesi Varidzi Vanofanira Kuziva Nezve Shopify SEO | Martech Zone
Ndezvipi Ecommerce Bhizinesi Varidzi Vanofanira Kuziva Nezve Shopify SEO
Chitatu, September 13, 2017 Douglas Karr
Iwe wakashanda nesimba kugadzira iyo Shopify webhusaiti kwaunogona kutengesa zvigadzirwa zvinotaura kune vatengi. Iwe wapedza nguva uchinhonga iwo dingindira, kurodha yako katalog uye tsananguro, uye kuvaka yako kushambadzira chirongwa. Nekudaro, zvisinei kuti inoonekwa sei saiti yako kana kuti zviri nyore sei kufamba, kana chitoro chako cheShopify chisina kutsvagiswa injini, mikana yako yekukwezva vateereri vako yakanangana ishoma.
Iko hakuna nzira yekutenderedza: yakanaka SEO inounza vanhu vazhinji kune yako Shopify chitoro. Dhata rakanyorwa neMineWhat akawana izvozvo 81% yevanotsvaga vatengi chigadzirwa vasati vatenga. Kana chitoro chako chikasaratidzika kunge chakakwirira mumatunhu, unogona kurasikirwa nekutengesa - kunyangwe kana zvigadzirwa zvako zviri zvemhando yepamusoro. SEO ine simba rekusveta vatengi nechinangwa chekutenga, kana kuenda navo.
Zvinodiwa Newe Shopify Chitoro
Chero chitoro cheShopify chinoda hwaro hwakanaka hweSEO. Uye yega SEO hwaro hwakavakirwa pane akanaka mazwi. Pasina rakakura kiyi yekutsvaga, haumbofi wakanangidzira vateereri chaivo, uye kana usinga tarise vateereri chaivo, mikana yako yekukwezva vanhu vangangotenga ishoma. Uyezve, kana iwe uchiziva nezve rako rakakosha rekutsvagisa, iwe unozokwanisa kuisa iyo ruzivo kune dzimwe nzvimbo dzebhizinesi, sekushambadzira zvemukati.
Tanga rako rekutsvagisa mazwi nekuita runyorwa rweakakosha mazwi iwe aunofunga kuti anowirirana nebhizinesi. Nyatsotaura apa- kana iwe uchitengesa zvekushandisa zvemuhofisi, izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kunyora mazwi akakosha emahofisi-ekudyidzana anoenderana mazwi ezvigadzirwa zvausingatengese. Kungoti inokwezva vanhu vanofarira zvekushandisa muhofisi, hazvireve kuti vanozofara kuenda kunzvimbo isina chigadzirwa chavakatanga kutsvaga paGoogle.
shandisa keyword research tools kuti ikubatsire kuunganidza ruzivo rwakanangana nezve ako anogona mazwi akakosha. Keyword ekutsvagisa maturusi anokuudza iwe kuti ndeapi mazwi akakosha ari kudiwa zvakanyanya, ndeapi mazwi akakosha ane makwikwi akaderera, vhoriyamu, uye mutengo pakudhinda data. Iwe zvakare uchakwanisa kuudza kuti ndeapi mazwi akakosha ari kushandiswa neako makwikwi pamapeji avo anozivikanwa. Mazhinji kiyi ekushandisa ekutsvagisa maturusi anopa emahara uye akabhadharwa vhezheni, zvisinei, kana iwe uchingoda kuyedza kuti inoshanda sei, unogona kushandisa iyo Google Keyword Turu Kuronga.
Gadzira Smart Chigadzirwa Rondedzero
Paunenge iwe uchinge wanyatsonzwisisa kuti ndeapi mazwi akakosha aunoda kushandisa, unogona kuaisa kune ako tsananguro yechigadzirwa. Izvo zvakakosha kuti iwe udzivise Keyword stuffing mune tsananguro dzako. Google inoziva kana zvirimo zvisiri zvechisikigo, uye ungangorangwa nekufamba kwakadaro. Zvimwe zvigadzirwa zvaunotengesa zvinoita kunge zvinotsanangudza wega; semuenzaniso, hofisi yako yekuchengetera chitoro inogona kunge iine nguva yakaoma kutsanangura zvinhu senge stapler uye pepa. Neraki, iwe unogona kunakidzwa netsananguro dzako kunongedza zvinhu kumusoro (uye uzvimake pachako mukuita).
ThinkGeek yakangoita izvo iine ndima-refu Tsananguro yeiri nyore mwenje mwenje weLED izvo zvinotanga nemutsara: "Unoziva chii sucky nezvenguva dzose matochi? Ivo vanongouya chete nemaviri mavara: chena kana kuti yero-yero-chena iyo inotiyeuchidza isu nezvemeno eanodisa kunwa kofi. Rufaro rwei irwo tochi? ”
Kurudzira Ongororo Kubva Kune Vatengi
Paunokoka vatengi kuti vasiye wongororo, urikugadzira chikuva chekubatsira kuwedzera chinzvimbo chako. Poshi ZenDesk kuongorora vakawana kuti 90% yevatori vechikamu vanokurudzirwa neyakajeka online ongororo. Zvimwe zvidzidzo zvakaratidza zvimwe zvakawanikwa: paavhareji, vanhu vazhinji vanovimba vanoongorora paInternet zvakanyanya sekuvimba kwavo kurudziro yezwi-remuromo. Izvo zvakakosha kuti kwete chete izvi ongororo pamapuratifomu ekuongorora, asi pane ako zvigadzirwa mapeji zvakare. Kune nzira dzinoverengeka dzeku kurudzira vatengi kuti vaongorore bhizinesi rako; pima zvaunogona kuita, uye ona kuti ndeipi nzira inokodzera bhizinesi rako.
Kuwana SEO Rubatsiro
Kana hurukuro dzese dzeSEO dzichikukurira, funga kushanda nekambani yekushambadzira kana agency kuti ikutungamire munzira kwayo. Kuve nehunyanzvi padivi rako kunokutendera kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ari kuseri kweSEO, pamwe nekutarisa zvakanyanya pane chako chigadzirwa, uye nekuendesa rakakura basa revatengi ruzivo.
Zvinoenderana ne SEOInc, an SEO inobvunza kambani muSan Diego, mamwe mabhizinesi anonetseka nezvekushanda pamwe nesangano nekutya kuregedza kutonga, asi izvi hazvisizvo - chero bedzi uchishanda nekambani ine mbiri.
Shopify rave sarudzo yepamusoro yekutengesa online. Nekuda kwekuwedzera kukosha kwekutyaira vatengi kunzvimbo dzeShopify-dzinopihwa simba, Shopify SEO yanga ichiona kukura nekukurumidza mumakore achangopfuura uye inotarisirwa kuramba ichikura zvakanyanya. SEOInc
Iwe unogona kutofunga nezvekushanda neanoziva freelancer uyo ane hunyanzvi hwekuratidzira muSEO uye yakazara portfolio. Chero chaunofunga, ramba uchifunga kuti SEO ndechimwe chinhu chinoda kuitwa nemazvo, uye kunze kwekunge iwe uchikwanisa kupa nguva yekudzidza matekinoroji akanakisa uye nekuabudirira kuashandisa, iri mari yakanaka yekupa iwo hunyanzvi kune rimwe bato.
Tags: ecommerce seokeyword researchkugadzirisa shopifyseoseoincshopifyshopify seothinkgeek
Izotope RX: Maitiro Ekubvisa Neruzha Ruzha kubva kuIzwi Rako Rekodhi
Zymplify: Kushambadzira seSevhisi yeBhizinesi Diki
Sep 24, 2017 na1:17 PM
Nice Saiti! Kuda zvako zvemukati!
Nov 22, 2017 na1:21 PM
akada uyu mutungamiriri. ndinotenda zvikuru nekugovana